Mmepụta LSR & Rubber - Chapman Technology Co., Ltd.
Onye kere Chapman nwere ike ịnye usoro njikwa ogo dị elu nke ndị ọrụ ahụike na ụlọ ọrụ ahụike chọrọ. Onye kere Chapman bụ ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 / NS-EN na ISO 123485: 2016 kwadoro, anyị na-anyakwa isi otu ntụpọ kachasị dị ala na ụlọ ọrụ anyị.
Onye kere Chapmancleanlọ ọrụ ọcha nke klas nke 8 nke ISO, yana nwanne nwanyị NKS's Class 7 cleanroom na Singapore na-egbochi mmetọ site na uzuzu na ihe ikuku ndị ọzọ dị na mbara igwe ma zute ụkpụrụ ISO dị mkpa maka nrụpụta ọcha.
Dịka otu n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi mbu nke ụwa, Onye kere Chapman na-arụ ọrụ nanị na mmiri mmiri silicone roba injection ịkpụzi. Anyị nwere n'ichepụta nka iji nye ọrụ ndị sitere na prototyping na serial production of high-precision components. anyị na-edozi usoro QA anyị iji mezuo ihe ị chọrọ.